Guriga Qoyska & Wanaaga Bulshadda - Articles: Waa maxay Guurku!
Waa maxay Guurku!
WQ:Sucaad A Maxamed March 28, 2006 sucaad@khadijahome.com Guurku waa marka ay gabar iyo nin ajaanib kala ahaa ay isku noqdaan labada isugu dhow aduunka oo ay iska xigsadaan dadkoo dhan.
Illaahay wuxuu karameeyey bani aadamka, kamuu dhigin insaanka xidhiidhka ka dexeeya labka iyo dhadiga sida xayawaanka oo kale , haseyeeshee wuxuu ka dhigay labada qof xidhiidhka ka dhexeeya mid ku xidhan sharciyo iyo xuduud iyo jacayl iyo wanaag iyo naxariis iyo dabacsanaan dhexdooda iyo dhawrsoonaan ay kaga fogaanayaan xumaanta.
Guurku waa sune kamida sunooyinka anbiyada iyo rususha iyo kuwa raacay jidkooda, waligeedna way soo jirtay, waxayna ka mid tahay asaaska dhismaha bulshada iyo wanaaga umada, waxaana ku jirta daganaashaha nafta, isbarasho labo ruux, isdhexgal labo dabeecadood iyo jiil kadhalasho.
Illaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri:
� Waxaa kamid�ah calaamooyinkiisa inuu idiinka abuuray naftiina Haween si aad isugu xasishaan. Yeelayna dhexdiina is jacayl iyo naxariis, taasina waxaa ugu sugan Calaamad Qowmkii fikiri. Suuratu Ar-ruum aayada 21�
Illaahay ayaa mahad leh inuu tirtiray guurarkii jaahiliga ee islaamka kahoreeyey, waxaa ka mid ahaa guurarkaas:
Labo nin oo is yaqaana ayaa labadooda xaas isku badalaya Ninka xaaskiisu markay daahir ka noqoto caadada ayuu ku oranayaa orod ninkaas utag ( intuu doorto ninka uu isleeyahay waa ka ugu fiican), marka ay xagiisa katimaadana ma taabanayo ilaa uu ka hubsado inay uur u yeelatay ninkaas, markaas ayuu ku farxi jiray. Niman tiradoodu ka yartahay 10 waxay u tagayaan gabadh oo lawada aqal galayaan, mudo kadib markay uur yeelato oo ay dhasho ayey uwada yeeraysaa iyadu nimankii, markay uwada yimaadaana waxay ka xulanaysaa mid kamida oo ay ku dhahaysaa adaa leh ilmahan, ninka la doorto wuu ku khasban yahay inuu ogolaado oo sidaas ayuu ku guursan. Shariicadeenuse waxay sharaftay gabadha muslimada cirdigeeda iyo jidhkeeda, saas darteed ayuu illaahay xarimay guurarkan hore.
Waa maxay ujeedada guurka laga leeyahay. Miyaa la iska guursadaa, waa maya illaahay xikmado ayuu u dhigay guurka, oo qof kasta markuu guursanayo uu ka fakarayo, kuna talagalaan labada qof ee is guursanayaa mas�uuliyadaas.
Hadafka ama u jeedada guurka waxaa kamid ah: Xasilooni iyo daganaasho
qofku xasilooni ayuu ka helaa guurka, naftiisa, jirkiisa, akhlaaqdiisa iyo fakarkiisa ayaa u daga waana wax uu illaahay ku abuuray labada qof , hadii ayna jirin xasiloonida labada qof ka dhaxaysa way isnacaan labada qof oo kala tag ayey kaliftaa. Diintaada oo ku ilaashamaysa
qofka waxaa u fududaata inuu indhihiisa daboosho, waxaana u fududaata inuu cibaadadiisa khushuuc iyo xasilooni u guto. Tarankoo bato
ciyaal ayaa meesha imaanaya, oo ninkii aabe ayuu noqon, gabadhiina hooyo, oo mid walba wuxuu ku fakari sidii caruurtiisa uu kuwa saalixiin ah oo wanaagsan unoqdaan, sida ubad wax islaamka u qabta oo cabsida illaahay ku kora. Naxariis iyo jacayl
qofku markuu ogyahay inuu jiro qof jecel, oo mar walba oo uu ku dhaco walwal uu ogyahay inuu qof jiro u naxariisanaya oo dhibta ka yareenaya, naftaa u dagtaa qofkaas. Mar walba markay labada qof wanaaga badiyaan ayey isa sii jeclaadaan. Baahida qofka oo qarsoonaata
illaahay bani aadamka wuxuu ku abuuray baahiyo kala duwan, waxaana kamid ah baahida jinsiga. habka kaliya ee uu u gudan karo qofku waa markuu guursado, si uu ku xifdiyo cirdigiisa iyo naftiisa kuna dhawrsoonaado.
on 22. March 2009 20:35:12
2997 Reads ·
Waa la iska qaatay caruurtaydi Q2aad
on July 23 2009 11:02:54
Mansha allah waaa Macaal aad U wanag Badan Jzkh
Haku Been abuuran ! 697
Basto & Kaluun (Laks/Salmon) 10973
Shurbada Karooto 8275
Peanut butter & Red Curry Pot 6904
Hilib & Fuul 9476
5,008,565 unique visits